Ọkụ obi mgbawa - Danger n'ime obi - ọrịa reflux
Ọrịa obi na-egbukepụ obi mgbawa | Mgbochi ọrịa
Gini mere afo adighi nso?
Kedu ihe bụ ihe mgbaàmà?
Kedu mgbe m ga-aga dọkịta?
Ọgwụ dị ka onye na-akpalite?
Kedu nnukwu ọnya nke ọrịa kansa?
Ọtụtụ ndị ahụwo foto a n'ihu: onye yiri ka ọ na-agbụ ọkụ, na nso ya isi isiokwu "Heartburn". Nke a bụ n'ezie ihe gbagọrọ agbagọ, n'ihi na nrịkasi obi, n'agbanyeghị aha ya, enweghị ihe ọ bụla metụtara ọkụ ma ọ bụ ọkụ. Kama nke ahụ, enwere mgbakasị nke membranes mucous na esophagus n'azụ ya - mmetụta na-adịghị mma.
Ọkụ obi mgbawa - Danger n'ime obi (ọrịa reflux)
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere ahụmahụ a mgbe ụfọdụ. Ogologo oge mgbaàmà ahụ na-apụ na ha mgbe awa ma ọ bụ karịa otu ma ọ bụ ụbọchị abụọ, ọ dịghị ihe na-echegbu onwe gị. N'ihe dị ka 10 ruo 15 pasent nke ndị emetụtara emetụ ọkụ na akpịrị, Otú ọ dị.
Ọkụ obi mgbawa - ọrịa reflux
Na ha, mucosa dị oke iwe nke na ọ na-agba ọkụ. Ihe a na-akpọ reflux ọrịa, nke na-esi na ya apụta, a ghaghị ịgwọ ya na nke ọ bụla. Ọ bụ ezie na nrịkasị obi nro dịka ihe ọ bụla na-adịghị njọ: n'ọrịa dị elu nke ọrịa ahụ, na-enweghị usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị, nsogbu ahụike siri ike - gụnyere cancer - egwu.
Azịza ndị na-esonụ maka ajụjụ ndị kachasị mkpa banyere nrịkasi obi na-enyere aka izere ihe kacha njọ.
Kedu ka nhụjuanya si ebilite?
Nkpọrọgwụ nke ihe ọjọọ bụ ihe na-egbu egbu. Ọ na-ebu ụzọ na-egwu ala ma na-agbada "nri" site n'ịwa ọcha ndị ọcha. Ọ na-arụ ọrụ a site n'enyemaka nke enzymes (pepsin) na - nke ahụ na-ada mbà na mbụ - akụkụ nke hydrochloric acid.
Hydrochloric acid na ahụ anyị? Ọ bụghị nke dị ize ndụ? Ọ bụrụhaala na mmiri gastric na-anọgide ebe ọ bụ - na afo. N'agbanyeghị pH acidic acid nke 1 na 3 - nke dị otu narị ugboro karịa acidic karịa mmanya - mmiri ọgwụ ahụ adịghị emerụ ahụ. N'ihi nhazi ha pụrụ iche, mgbidi dị n'ime afọ nwere ike ịnagide ọnọdụ a na-emebi emebi.
N'ikpeazụ, sphincter na-eme ka mgbanwe dị n'etiti esophagus na afo na-eme ka ọ ghara ịdị na-esi n'àkwà elu nke afo. Mana oru nke ike a nwere ike inwe nsogbu n'ihi ihe dị iche iche (lee ajụjụ na-esonụ). N'ihi ya, ọdịnaya afọ na-abanye n'ime esophagus ma wedata mucosa ahụ. A na-ahụ nke a dịka nrekasi obi.
Sphincter, nke a na-akpọ "sphincter", nke na-emechi ọnụ ụzọ afọ, nwere ike ịda mbà n'ihi ihe dị iche iche. Nke mbụ, ọ bụghị ihe a na-ahụkarị na nká, nke bụ ihe mere nkata obi ji amalite site na 50. Afọ na-adịwanye njọ karị. Nke a na-emekarị n'abalị, n'ihi na sphincter n'etiti esophagus na afo na-ehi ụra ọbụna karị n'oge ụra. Tụkwasị na nke ahụ, a kwadoro reflux nke ọdịnaya ọdịnaya dị ka ụra.
N'ọnọdụ ndị ọzọ, ọkpụkpụ diaphragmatic na-ebute ngbanwe nke afọ n'ime afọ. Okpukpe ahụ na-efunahụ ya, sphincter anaghịkwa arụ ọrụ nke ọma. N'ime nnukwu ọnyá diaphragmatic, ihe si n'afọ pụta mgbe ụfọdụ na-agbanye n'ime pharynx.
Ihe mgbaàmà nke nrịkasi obi bụ ihe na-egbu mgbu ma na-ere ọkụ n'ime afọ. Mgbu ahụ na-egbuke egbuke n'azụ nku. Ịṅụbiga mmanya ókè ma ọ bụ ịṅụ mmanya adịghị eme ka mmetụta ahụ ka mma. Ma mmetụta a abụghị ihe dị mkpa. N'ọnọdụ ụfọdụ, reflux nke mmiri gastric n'ime akpịrị na mbụ anaghị ebute mgbaàmà ọ bụla - nke a bụ karịsịa aghụghọ. Ọ bụrụ na ihe mgbaàmà na-apụta mgbe e mesịrị, ọrịa ahụ nwere ike ịbụ na ọganihu dị elu, nke na-eme ka ọgwụgwọ sie ike.
Kedu ihe mgbaàmà dị iche iche?
Gastric acid na esophagus mgbe ụfọdụ na-akpata mgbaàmà nke onye ọrịa ma ọ bụ dọkịta na-ejikọta na nrịkasi obi. Ọbụna ndị na-eto eto na-emekarị mkpesa banyere iwe mgbu. Ọ bụrụ na ndị dọkịta achịzila ọkpụkpụ obi, nsogbu ahụ na-abụkarị nrekasi obi.
Mmiri n'ime akpịrị pụkwara ịkpata ụkwara ma ọ bụ nkwarụ na-adịghị ala ala, nke ndị dọkịta na-esikarị kọwaa dị ka ndị na-akwado nkwenkwe oyi ma ọ bụ ụkwara ume ọkụ. Mgbe ụfọdụ, ndị na-arịa ọrịa na-akọ akụkọ banyere ahụike nke mba ọzọ na larynx.
Ịfụcha ma na-ere ọkụ n'oge ụfọdụ abụghị ihe kpatara nchegbu. Na mkpesa obere na onye ọ bụla agaghị agakwuru dọkịta. Ma eleghị anya, kọfị dị ukwuu, ma ọ bụ ihe dị arọ, nri buru ibu bụ ihe kpatara ya. N'ime nri ndị dị otú ahụ, afọ na-emepụta acid karị. Mmetụta na-adighi adọrọ na akpịrị na-agakarị n'onwe ya. Otú ọ dị, ọ bụrụ na mgbaàmà ahụ na-emekarị - ọtụtụ ugboro n'izu - ndị nwere nsogbu kwesịrị ịjụ dọkịta. Onye nwere ntaramahụhụ ọtụtụ ugboro n'ụbọchị maka izu abụọ ma ọ bụ izu ga-atụ aro ka ị gbanwee ọnọdụ nke esophagus.
Kedu ihe ọgwụgwọ dị?
Na mbu, enwere nyochaa nke omume. Ahụ ọ dịkwa arọ? Enwere m ike ịkwaa oke? Nnukwu ibu na umengwụ nwere ike ime ka obi nkoropụ. Kpachara anya mgbe ị na-aṅụ mmanya na-acha ọcha, sweets na abụba. O doro anya na ọ ka mma ime ma ọ bụghị ya. Otu ihe a na-emetụtakwa kọfị, nwa tii na ihe ọṅụṅụ mmanya. Ịṅụ sịga na-emerụ ahụ n'ihi na nicotine na-ebelata salivation nke na-egbochi afo acid. Ọ bụ ezie na àgwà ngbanwe nwere ike inye aka, ọ na-ezughị ezu. Maka ikpe dị otú a, enwere ọtụtụ ọgwụ ọjọọ.
Maka ọrịa dị nro, ọgwụ ndị na-agwọ ọrịa na-adị (ihe ndị dị irè: hydrotalcite, Algeldrat, magaldrate, sodium aluminum carbonate) yana calcium na magnesium carbonate. Nkwadebe nke nwere ranitidine ma ọ bụ famotidine na-egbochi ka e guzobere gastric acid. Ọ bụrụ na nsogbu nke afo afo bu ihe kpatara ya, ogwu ndi ogwu na ihe ndi ozo nke peppermint, caraway, gentian na ilu candida flower help. N'ọnọdụ dị njọ, ndị dọkịta na-edepụta ọgwụ ndị sitere na klas nke prohibit pump inhibitors. Ha na-egbochi ka e guzobere acid karịsịa, mana anaghị arụ ọrụ ozugbo.
Ụfọdụ ndị mmadụ na-eme ka ahụ ahụ sphincter nwee ike ịkwaa ụra n'ọnụ ụzọ afọ, na-eme ka reflux nke ọdịnaya eriri n'ime esophagus. Ndị a na - agụnye ụkwara ume ọkụ, ọrịa obi na ọbara mgbali. Ọzọkwa, ụfọdụ ndị na-ekpo ọkụ na calcium na antidepressants pụrụ inwe mmetụta ọjọọ. Otú ọ dị, ndị ọrịa agaghị eme ihe na-enweghị ọgwụ ha - nke ahụ ga-abụ egwu egwu. Ndị na-arịa nrịkasi obi ga-ebu ụzọ gwa dọkịta ha okwu.
Ọrụ ọ bara uru?
Ọ bụrụ na onye na-arịa ọrịa nkwụkasi adịghị achọ ịṅụ ọgwụ ọ bụla, ọ bụrụ na ọ naghị anabata ha ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ha enweghị mmetụta n'ahụ ha, ndị dọkịta nwere ike inyere aka mgbe ịwa ahụ. A na-akpọ ụdị ọrụ a "ngwa ngwa ngwa ngwa". Ndị dọkịta na-agwọ si n'anụ ahụ na-abanye n'ọnụ ụzọ mbata na-etolite ihe na-edozi, nke ha na-etinye na ntughari si esophagus ruo afọ. Ihe na-esi na ya pụta na-eme ka sphincter na-adịghị mma rụọ ọrụ nke ọma ọzọ. Ọtụtụ ndị na-arịa ọrịa na-ebi ndụ n'enweghị nsogbu mgbe ha rụsịrị ọrụ. Na mgbakwunye na nsogbu ndị nwere ike ịmalite ịwa ahụ (ọrịa, ngwọta na-emerụ ahụ), usoro ahụ dị mma (ọ bụrụ na onye dọkịta nwere ahụike rụrụ ya).
N'ihe dị ka pasent 10 nke ndị nwere ọrịa reflux, e nwere mgbanaka mucosal na esophagus. Ndị a bụ ọrịa cancer na-aga n'ihu, ndị dọkịta na-ekwu maka "Barrett's syndrome". A na-emetụta ọtụtụ n'ime ndị ọrịa a, bụ ndị ọrịa reflux mere n'oge na-adịghị anya ma ọ bụ na mbụ adịghị ahụ anya. Ọbụna n'oge a, ndị dọkịta nwere ike ịgwọ ya nke ọma - ọ bụrụhaala na onye ọrịa ahụ na-aza mkpesa ya n'oge.
Nke a abụghị mgbe niile, yabụ mgbe ụfọdụ, ezigbo cancer malitere site na precancer. A na-ejikarị ụba dị otú ahụ anọgide na mpaghara. Mgbe a chọpụtara na mbụ, ndị dọkịta na-awa ahụ na-ejikarị njikwa wepu mkpụrụ ndụ cancer na-eji usoro endoscopic. Ọ dị mkpa iji nlezianya nyochaa ọnọdụ nke ndị ọrịa ndị dị otú ahụ mgbe ọ gbasịrị. Ọ bụrụ na ị ga-enwe ọganihu, nsogbu siri ike dị obere.
Medicine Cabinet & Medicine Cabinet | Mgbochi ọrịa
Ogwu ojoo Mgbochi ọrịa
Ahụhụ ahụhụ | Mgbochi ọrịa
Boreout | Mgbochi ọrịa
Ngwọta ụlọ Mgbochi ọrịa
Ikike ígwè | Mgbochi ọrịa
Ọnụ Mmiri Na-eme n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ | Ọgwụ ahụike